भिडियो समाचार : प्रधानमन्त्रीलाई एपेन्डिसाइटिससहित पेटको संक्रमण, कर्मचारीमाथि खनिए मन्त्री | Ratopati
भिडियो समाचार : प्रधानमन्त्रीलाई एपेन्डिसाइटिससहित पेटको संक्रमण, कर्मचारीमाथि खनिए मन्त्री
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १०, २०७६ chat_bubble_outline0
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ ।
गएराति पेट दुखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको थियो । चिकित्सकहरुको परीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीलाई एपेन्डिसाइटिस भएको भन्दै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको त्रिविस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर ट्रान्सपालान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन भएको थियो ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा जानकारी दिँदै शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिहान ९ बजे उपचारका लागि उक्त सेन्टरमा पुगेका थिए । विज्ञ चिकित्सकहरु सम्मिलित टोलीले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा एपेन्डिसाइटिस सहित पेटको संक्रमण देखिएकाले शल्यक्रिया गरिएको बताए ।
तत्काल अस्पतालले ‘ल्याप्रोटोमी’ र ‘एपेन्डिक्टोमी’ लगायतका विधिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार गरेको उनले बताए ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सघन उपचार कक्षमा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा केही समययता समस्या देखिँदै आएको छ । मिर्गौलामा समस्या देखिएका कारण कात्तिक १३, यता ओलीको चारपटक डायलासिस भैसकेको छ । पछिल्लो पटक गत आइतबारमात्रै उनको मृगौलाको डायलासिस गरिएको थियो । यसैबीच नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।
अन्य मुख्य समाचार पढ्नुहाेस्
कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा मतपत्र पुग्यो, सुरक्षाका लागि मतदान केन्द्रलाई तीन तहमा वर्गीकरण
संविधान संशोधनको मुद्दा : उपेन्द्र यादवलाई एउटा मौका
भारतीय राजनीतिज्ञको शरणमा आलमका भाइ
भक्तपुरमा उपनिर्वाचन : नेकपा जोगाउने, काँग्रेस र नेमकिपा पल्टाउने दाउमा
‘कास्की-२ बाट विजयको बिगुल फुक्छौँ’
बानेश्वरमा डाक्टरलाई ठक्कर दिने गाडी र चालक भेटियो, कसरी पुगे रामेछाप ?
समाजवादीले सरकार छाडेन, अब के गर्छ राजपाले ?
प्रचण्डभन्दा म सिनियर, बैठकको अध्यक्षता मैले पनि गर्छुः प्रधानमन्त्री ओली
एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसनपछि यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ
मेडिकल कलेज शुल्क बिबाद
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले विश्वविद्यालयले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिएको दावी गर्दै सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । यसअघि सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छलफलका लागि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई सोमबार मन्त्रालय बोलाएका थिए ।
सोमबार मेडिकल सञ्चालकहरुले थप एक दिनको समय माग गरेपछि मंगलबार पुनः मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । छलफलपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क समायोजन गर्न लचिलो बनेका हुन् । यद्यपी उनीहरुले २०७२ सालमा गरिएको मेडिकल कलेज शुल्क निर्धारण नै वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले २०७३ सालमा शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन गरी निर्धारण गरेको शुल्कलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको समेत बताए ।
सरकारले एमबीबीएस, वीपीएच, नर्सिङ, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटी लगायतका आठ वटा संकायको शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, कलेजले आठ वटा संकायका ३२ ब्याजका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् । जसको निरन्तर विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ ।
मन्त्री बिना मगर
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले महिनावारीलाई पाप वा धर्मको रुपमा लिन नहुने बताएकी छिन् ।
मन्त्री मगरले महिनावारीलाई धर्मसँग जोडने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न महिलासँग सम्बन्धित सबै सामाजिक संघ, संस्था र स्थानीय तहले अभियाननै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा सेनेटेरी प्याड वितरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमले महिनावारीलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्न नहुने सन्देश दिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
कर्मचारीमाथि खनिए मन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी उद्योगहरु धरासायी हुनुमा कर्मचारीहरु जिम्मेवार बताएका छन् ।
कर्मचारीहरु निजी स्वार्थमा लागेकाले सरकारले संचालन गरेका उद्योगहरु फष्टाउन नसकेको उनले बताए ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टले धरासायी अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरुलाई नाफामुखि बनाउन आफू लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठक
नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि पहुँच विस्तार तथा दुई मुलुकबीचको व्यापारमा सहजीकरणका लागि मंगलबारबाट काठमाडौंमा सो बैठक सुरु भएको हो । जल मार्ग र थप नयाँ बन्दरगाह प्रयोगबारे सन्धिमा समावेश हुने विषयलाई बैठकले अन्तिम रुप दिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
सरकारले स्थानीय तहमा बीउबिजनको दर्ता गर्ने कामलाई अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । कृषिमन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले स्थानीय तहहरु बीचमा बीउको विषयलाई लिएर विवाद हुने भएकाले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बीउबीजन दर्ताका लागि अनुमति दिन नसक्ने प्रष्टयाएका हुन् ।
कृषि समितिको बैठकमा उनले नेपाली जनजिब्रोले मन पराएको बीउलाई संरक्षण गर्न सरकारले कृषक समूहको नाममा दर्ता हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको पनि जानकारी दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ । आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम भने यथावत रहने महासंघले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङसँग भएको छलफल सकारात्मक भएपछि महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ ।
सागको औपचारिक उद्घाटन मंसिर १५ गते
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को औपचारिक उद्घाटन मंसिर १५ गते हुने भएपनि भलिबल खेल बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिाषद् (राखेप) कभर्ड हलमा अपरान्ह ३ः०० बजे सुरु हुने महिला भबिललको पहिलो दिन नेपाल र बंगलादेश भिड्नेछन् । नेपालले लिग चरणको पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग खेल्न लागेको हो । ६ देश सहभागी महिला भबिलमा नेपाल समूह ‘ए’ मा परेको छ ।
नेपालको समूहमा भारत र बंगलादेश छन् । समूह ‘बी’ मा माल्दिभ्स, श्रीलंका र पाकिस्तान रहेका छन् । नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेल शुक्रबार भारतसँग खेल्नेछ । समूहको शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । नेपालले सागका लागि यसअघिनै महिला भलिबल टोलीको घोषणा गरिसकेको छ ।
हालै बंगलादेशमा सम्पन्न एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जिते महिला टोलीले उपाधि जित्ने लक्ष्यका साग मिहिनेत गरिरहेको टोलीका प्रशिक्षक जगदिन भट्टले बताए ।
यसैबीच रकारले राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमका खेलाडीलाई जनही ३ लाख नगदसहित सम्मान गरेको छ । बंगलादेशमा सम्पन्न एभिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता टिमलाई मंगलबार सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको हो
#केपी ओली#भिडियाे समाचार
हाम्रो व्यवस्था नै खतरातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् : नेता नेपाल
संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत निर्दलीय अभ्यास गर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा उचित हुन सक्दैन : गृहमन्त्री
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन (लाइभ)
देशको प्रगतिशिल शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री